रोमाको प्रगती र अपांग इतिहांस
तपाइकै मनलाई उत्तर दिनुहोस
केही पहिला रोमा न्यौपानेको मेल उनको ब्लगको ठेगाना ( http://romaneupane.blogspot.com/)सहित प्राप्त भएको थियो। ब्लग हेरें, यु ट्युबका क्लिपहरु हेरें। नेपालका प्राय पत्रिकाले उनको समाचार लेख्न भ्याइसकेछन। यु टुबको भीडियोले बलियो प्रमाण देखाउदै थिए उनि सबल सरह कम्मर मर्काएर मनोरन्जन लिन र दिन सक्छिन। केही लेखु उनको बारेमा जस्तो लाग्यो तर लेख्ने कुरा त सबै पत्र पत्रिकाले लेखी सकेका थिए। फेरी उनको मनोबल पनि असधारण थियो, मेरो लेखले मनोबल के नै थप्ला र ? फेरी उनि दौंतरीको सन्जाल सम्म पनि आउने हुन की होइनन? यस्तै कुरा मनमा खेलाउदा खेलाउदै समय गएको पत्तो नै भएन।
यो बिषय यतिकै हरायो। तर आज यसो यु टुबमा आखा नचाउदै थिंए, रोमाको भीडियो देखा पर्‍यो। उनले कम्मर मच्चाएर गितमा रमेको फेरी हेरें। अनी पुन उनको ब्लगमा छिरें। ब्लगमा अझ सामाग्री थपेर चुस्त पारिएको थियो। खबरहरुमा रोमा अझ छाइएकी थिइन। तर किन किन सबै समाचारमा रोमालाइ प्रोत्साहन भन्दा सान्तवना दिएको पाए। आफुले देखेका भेटेका अपांग आफ्न्त,साथीभाईको सम्झना आयो। हुन पनि हामी अपागंलाइ प्रोत्शाहन भन्दा सहानुभुतीले नै ढाक्ने गर्छौ र उनिहरुला झन अपागं बनाछौं। म पनि सबै अपांगसंग सान्तवनासंगै रम्थे।
जब केही बर्ष पहिले अध्यनको सिलसिलमा अमेरिका आए, अपांगलाइ हेर्ने द्रिष्टीमा १८० डिग्री परिबर्तन आयो। खासमा नेपालमा अपागंलाइ त अबसरको ‘अ’ पनि दिने गरेका रैनछौं। यांहा अपांगहरु सपांग सरह कसैको सहारा बिना स्वतन्त्र जिबन जिउने मात्र होइन सपांगसंग हरेक काम गरिराखेका हुन्छन। हुन त उनिहरुलाइ प्राय सबै बहानमा आबत जाबत गर्ने मिल्ने बनाइएको हन्छ, घर तथा अफिसहरुमा सजिलै आउने जाने ब्यबस्था गरिएको हुन्छ र चर्पी देखी सपिगं मल सम्म कुनै पनि ब्यबधान नहुने ब्यबस्था मिलाइएको हुन्छ। खाने पानि, बिजुली बत्ती त पाउन हम्मे हम्मे भएको देशमा अपांगलाइ अमेरिका सरह ब्यबस्थाहोस भन्न खोजेको त होइन तर जती जहां सकिन्छ अपांगलाइ समाजिक ब्यबस्थामा सामेल गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ। सहानुभूती र भत्ता होइन अपांगलाइ सामाजीक हैसियतका साथ बाच्न दिनु पर्दछ। त्यसो गरे मनोबल बलियो भएकी रोमा मात्र होइन मनोबल खोसीएका कैयौं नेपाली अपांगले सहि जिबन जिउन मात्र होइन सबल सरह देशललाइ केही दिन पनि सक्छन। आठ बर्षको उमेरमा दुर्घटनमा एउटा खुट्टा गमाएकी रोमा प्रशस्सत सफलता हासील गरिसकेकी छन। तर रोमा आफै उन्नतीको शिखरमा मात्र नपुगी अन्य अपांगलाइ बैसाखी दिएर आफु संगै माथी लाने प्रयासलाइ मैले प्रशंसाका शब्दले जती समेट्न खोजे पनि सफल हुन सकिन। उनका यु टुबका क्लीप र उनको ब्लगमा तपाइ आफै गएर प्रशंसाको खादा ओढाउनुहोला।
(१) यदी भोक प्यास ले मर्नै लागेको मानिस भेटे तपाईं के गर्नु हुन्छ ?
(२) भिडमा हराएर रोइ रहको बालक भेटे के गर्नु हुन्छ ?
(३) एक्कासी तपाईं संग डांका आई लाग्दा के गर्नु हुन्छ ?
(४) तपाईं संग श्रीमती छे बच्चा छन -तर एक्कासी कुनै सुन्दर
महिलाले प्रेम प्रस्ताव राखे तपाईं के जवाफ दिनु हुन्छ ?
(५) तपाईं आफ्नो मित्रको घरमा हुंदा टेवलमा वा अरु कुनै स्थान मा
राखिएको ठुलै धन रासी देखेमा र मित्र नभएको अवसरमा के गर्नु हुन्छ ?
(६) तपाईंको साथीले तपाईंको पैसा चोरि गर्‍यो भने तपाईं के गर्नु हुन्छ ?
(७) तपाईं आफ्नासंग र पराइसंग कस्तो ब्यवहार् गर्नु हुन्छ ?
(८) तपाईंको जाँड र रक्सिको कारणले घरमा सधैं झगडा हुन्छ भने
तपाईं के गर्नु हुन्छ ?
(९) बाटोमा साथी भेटिदा नमस्ते गरे हुँदैन ? हातै मिलाउनु पर्ने किन?
(१०) सार्वजनिक स्थान मा चर्को स्वरले बोल्नु के उचित हो ?
(११) तपाईं लाई अरुले विश्वाश गर्दा गर्दै पनि फेरी किन
अनबिस्वासिको पात्र बन्न खोज्नु हुन्छ?
(१२) के तपाईं भित्र इमान्दारिता छ ?
(१३) तपाईंमा अरुको कुरा गरेर आफ्नो समय बर्बाद गर्ने बानी त छैन ?
(१४) तपाईंले अरुको लागि राम्रो देखाउन कपडा पहिरिनु हुन्छ कि आफ्नो लागि ?
(१५) तपाईंमा धन कमाएर बढी घमन्ड त चढेको छैन ?
(१६) तपाईं लाई मन पर्ने बिचार साथी वा आफन्तले मन नपराउन सक्छन –
के तिनिहरु तपाईंका बिरोधि नै हुन त ?
(१७) तपाईं ले छिटो गर्छु गर्दा कतै ढिलो त भएको छैन ?
(१८) धेरै राम्रो बन्न खोज्दा कतै नराम्रो त भएको छैन ?
(१९) रिसले तपाईं लाई फाईदा गरेको कुनै रिकर्ड छ कि ?
(२०) म र मेरो मात्र भन्ने सोच ले तपाईं कतै ग्रसित त हुनु हुन्न ?
(२१) खान नपाएर भोकै हुनु र संपन्नसाली ले एक दिन भोकै बस्नु
के एउटै अर्थ लाग्ला?